‘फागुनमा महाधिवेशन गर्न गाह्रो छ’
नेपाली पब्लिक बिहीबार, भदौ २५, २०७७
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन आगामी फागुनका लागि तोकिएको छ । तर बढ्दो आन्तरिक किचलोका कारण निर्धारित मितिमै महाधिवेशन हुन गाह्रो छ । संस्थापन र संस्थापनईतरबीच द्वन्द्व बढिरहेका बेला महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर नेपाली पब्लिकका लागि कृष्ण गिरीले दुवै पक्षका नेतासँग कुराकानी गरेका छन् । यस क्रममा नेकाका नेता एनपी साउदसँगको संक्षिप्त अन्तर्वार्ता-
0 महाधिवेशनको तयारी कस्तो छ ?
लकडाउन र निषेधाज्ञाले देश ठप्प छ । कोरोना महामारीका कारण मानवीय क्षति भएको छ । हाम्रा नेता कार्यकर्तालाई पनि कोरोना संक्रमण भएको छ । कञ्चनपुरको हकमा पार्टी सहसचिव, पूर्वसहसचिव र पूर्वकोषाध्यक्ष आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको क्यालेन्डर प्रभावित हुने नै भयो । पार्टी समायोजन गर्न बाँकी रहेका जिल्लामा छिटो समायोजन गर्नुपर्नेछ । सक्रिय सदस्यता वितरण गर्न बाँकी रहेका जिल्लामा त्यो काम पनि गर्नुपर्छ । नयाँ सदस्यता वितरण गर्ने, अन्य पार्टीबाट आएका साथी र एकताबाट आएका साथीलाई सक्रिय सदस्यता वितरण गर्ने काम भइरहेको छ ।
0 तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुने सम्भावना छ ?
तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुन गाह्रो छ । कोरोनाका कारण विश्व नै भयभीत छ । त्यसको असर यहाँ पनि परेको छ । पछिल्लो समयमा नेपालमा पनि कोरोना सक्रमण दर धेरै उच्च रहेको छ । यस्तो अवस्थामा वडादेखि प्रदेशसम्मका सम्मेलन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । यस्तो अवस्थामा अहिले नै तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुन्छ भन्न सकिँदैन । वडादेखि प्रदेशसम्मका सम्मेलन भएनन् भने महाधिवेशन आफैँ प्रभावित हुन्छ नै । जुन छिटो गरौं भनेर भन्न सकिने अवस्था कोरोनाका कारण छैन ।
0 संस्थापन पक्षले महाधिवेशन धकेल्न बहाना खोजेको आरोप छ नि !
कोरोना महामारी हाम्रो महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्न आएको होइन । यसले विश्वलाई नै प्रभावित पारेको छ । विश्वभरि आर्थिक अवस्था ओरालो लागेको छ । बेरोजगारी बढेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । मानिसमा त्रास छ । यसका बाबजुद पनि नेपाली कांगे्रसको आन्तरिक रूपमा केही कमी कमजोरी नहोला भन्न सकिँदैन । यसलाई सुधार गर्दै जानुपर्छ । तर केही साथीले सुरुबाटै पार्टीको आन्तरिक कामकारबाहीको विरोध मात्र गर्नुभयो । नेपाली कांग्रेसको विधानअनुसार महाधिवेशन हुनुपर्छ । हामीले गर्नैपर्छ । तर कसैले गर्न चाहेन भनेर आरोप लगाउनु राम्रो होइन । समयअनुसार हुने हो । एक वर्ष थपियो । मिति घोषणा भएको छ तर कोरोनाका कारण यो प्रभावित हुँदा कसैको दोष होइन । यसलाई सबैले आत्मसात् गर्नुपर्छ । आरोप प्रत्यारोप होइन ।
0 विभाग गठन र प्रतिनिधि छनोटमा संस्थापन पक्षले एकलौटी निर्णय गरेको आरोपलाई के भन्नुहुन्छ ?
विधानमा अधिवेशन सकिएको तीन महिनामा विभाग गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अघिल्लो समयमा म पनि कार्यसमितिमा थिएँ । तर त्यो समयमा विभागदेखि अन्य काम समयमा हुन सकेका थिएनन् । निर्धारित समयमा कुनै पनि काम गर्न सकिएन भने त्यसको औचित्य नै सकियो भन्नु हुँदैन । यसले गर्ने काम हुन्छन् । यो नै यथेष्ट कारण होइन । जहाँसम्म एकलौटी गर्‍यो भन्ने छ, त्यो होइन । आज पनि सभापतिले मिलेर विभागदेखि अन्य काम गरौं भन्नुभएको छ । सहमतिमा विभागका प्रमुख बनाऊ भन्नुभएको छ । हरेक ठाउँमा नियुक्ति गर्दा मेरिटअनुसार गर्ने कि भागबन्डामा गर्ने हो भन्नुभएको छ ।
आगामी महाधिवेशनमा एकताको सन्देश पनि हुन्छ । मिलेर जाऔं भन्नुभएको छ । नेकपाको विकल्प हो भन्ने हुन्छ । एकता, मेलमिलाप हुनु पर्छ । विरोध गरेर कसैको भलो हुँदैन । मिलेर अगाडि बढेमा सबैको भलो हुन्छ ।
संवादको कमी छ । इगो कारण पनि छ । पार्टी सभापति सबैलाई समेटेर जान तयार हुनुहुन्छ । यस्तो हो भने समस्या जहाँ छ, त्यहाँबाट एकताको काम हुन्छ । एकल निर्णय गर्ने बाटोमा जानुभएको भए त विधानमा त सभापतिले विभाग गठन गर्ने अधिकार छ । तर, उहाँले सहमति खोज्नुभयो । त्यसकारण साथीहरूको आरोपमा सत्यता छैन । सबैले मिलेर जाने हो ।
0 नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको कुरा उठेको छ । अबको अधिवेशनबाट त्यसको अभ्यास सम्भव छ ?
पार्टीको महाधिवेशनमा उम्मेदवार उठ्छन् । यसमा धेरै कुरा उठ्छन् । पुस्तान्तरण, विधि विधानका कुरा उठ्छन् । यसका लागि पनि महाधिवेशन नै अन्तिम हो । यहाँ कसैलाई पार्टीको महाधिवेशनमा उम्मेदवार नउठ भन्न पाइँदैन । यस्तो भएपछि जसको विचारले नेतृत्व गर्छ, त्यसले महाधिवेशनबाट नेतृत्व गर्छ । उमेर बढी भएकालाई म मत दिन सक्दिैन भन्न सकिन्छ । अहिले पनि दोस्रो पुस्ता तयार भएको छ । कैयांै मानिस तयारीमा पनि छन् । समयमा सबै कुरा आउँछ ।
0 तपाई नेतृत्व लिन तयार हुनुहुन्छ कि ?
म नेतृत्वमै छु । १५–१६ वर्षदेखि केन्द्रीय सदस्यमा छु । अहिले महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । देशभरिका साथीहरूसँग छलफल गर्न सकिएको छैन । सबैसँग छलफल नगरी केही भन्न सकिँदैन । सबैसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्छु ।
0 काम गर्ने कुरामा कमी कमजोरी भयो होला भन्नुभयो । तर कांग्रेसले प्रभावशाली प्रतिपक्षको भूमिका निभाउन नसकेको त हो नि ! होइन र ?
पहिलेको जस्तो अवस्था छैन । पहिला ६ या ९ महिनामा सरकार परिवर्तन हुन्थ्यो । त्यो समयमा प्रतिपक्षको भूमिका देखिन्थ्यो । अहिले बहुमतको सरकार छ । पहिला अविश्वासका प्रस्ताव आउँथे । गठनबन्धनमा सरकार बन्थ्यो । सरकारले गरेका काम राम्रा छैनन् । प्रतिपक्षले पनि आफ्नो काम गरेको छ । हामी जनताको पक्षमा बोलिरहेका छाैँ । सरकारले गरेका नराम्रा कामको हामीले सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठाएका छौं । जनताका ‘इस्यु’ उठाउन हामी चुकेका छैनाैँ । तर अहिले कोरोनाका कारण आमसभा भेला गर्न सक्दैनाैँ । त्यसैले हामीले जनताका मुद्दा सरकारसम्म पुयाएका छौं । सभापति पटक पटक प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जानुभएको छ । ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं । सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छाैँ । तर जति जनताले चाहना राखेका छन्, त्यति नभएको हो ।
0 कोरोना महामारीको समयमा पनि कांग्रेसको कहीँ कतै उपस्थित देखिएनन् नि ? यति ठूला ठूला भ्रष्टाचारका कुुरा बाहिर आउँदा पनि सरकारमाथि दबाब दिन सकेन भन्ने छ ?
सरकार ठूलो भ्रष्टाचारको मुद्दामा सामेल छ । अरू त अरू स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा पनि सरकार मुछिएको छ । कोरोना महामारी रोकथाममा चुकेको छ । जनतामा निराशा छ, सरकारप्रति आक्रोश छ । अर्थतन्त्र चौपट भएको छ । सत्ताधारी पार्टीका नेताहरू सत्ता केन्द्रित गतिविधिमा मात्र लागेका छन् ।
यो सरकारसँग धेरै दम्भ छ । राज्यका अंगलाई प्रभावित गरेको छ । संवैधानिक निकायलाई प्यारालाइज्ड गरेको छ । यसको विरोध हामीले गर्दै आएका छौं । यो सरकार अधिनायकवादी छ । यो जनताप्रति जिम्मेवार छैन । यसको विरोध हामी गरिरहेका छौं ।
अर्को पक्षका नेता अर्जुननरसिंह केसीको अन्तरर्वार्ता पनि पढ्नुहोस्
‘संस्थापनको मनलाग्दी सहेर बस्दैनौं’
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ २५, २०७७ २३:३५